FALLANQEYNTA GROUP A: Basel VS Manchester United, CSKA Moscow VS Benfica- Zlatan Oo Kusoo Bilaabanaya | Ciyaarside.com
FALLANQEYNTA GROUP A: Basel VS Manchester United, CSKA Moscow VS Benfica- Zlatan Oo Kusoo Bilaabanaya
Manchester United ayaa u baahan inay iska ilaaliso guuldarro kulanka ay la ciyaareyso caawa kooxda Basel si ay u xaqiijiyaan booskooda wareega 16ka Champions League.
United ayaa hogaanka u heysa Group A, iyagoo badiyay dhamaan afartii kulan oo ay ciyaareen, waxaana ay dhaliyeen 10 gool, halka kaliya hal gool laga dhaliyay.
Waxa ay 3-0 ku garaaceen Basel garoonka Old Trafford kulankii lugta hore ee labada koox, halka sidookale dhibcaha ay ka qaateen kooxaha CSKA Moscow iyo Benfica kulamadii kale ee Group A.
GAROONKA: St Jakob-Park
Phil Jones, Eric Bailly iyo Michael Carrick ayaa dhamaantood dhaawac kaga maqnaan doona Manchester United kulanka ay usafrayaan kooxda Basel, halka Zlatan Ibrahimovic uu kusoo bilaaban doono caawa.
Marcos Rojo ayaa kasoo laabtay dhaawac jilibka ah, halka Ashley Young, Juan Mata iyo Antonio Valencia aysan kujirin safarka Switzerland.
Basel ayaa waxaa ka maqnaan doona weeraryahankii hore ee kooxda Norwich Ricky van Wolfswinkel, iyadoo aysan jirin dhaawac kale oo dheeraad ah oo heysta kooxdan.
Kulankan wuxuu noqon doonaa kulankii lixaad ee ku dhexmara kooxahan tartamada yurub, dhamaan kulamadooda waxay ahaayeen Champions League, United ayaa badisay labo jeer, halka kooxda reer Switzerland ay badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah lixdaas ciyaar, labada kalana barbaro ayay galeen.
Ma jirto koox Ingiriis ah oo waligeed ku guuleysatay inay shabaqa ilaashato iyadoo garoonkeeda kula ciyaareyso Basel tartamada Yurub, Kooxda Swiss ayaa min 1-0 ku badisay laba ka mid ah seddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda ku wajahday koox Ingiriiska.
Waa markii sagaalaad ee koox Ingiriis ah ay ku guuleysato afar kulan oo oo xiriir ah Champions League, iyadoo Manchester United ay heysato lix ka mid ah guulahaas oo yimid sannadihii (1997-98, , 2002-03, 2007- 08 iyo 2012-13).
Dhinaca kale isla Grop-kaan waxaa caawa ku ballansan kooxaha kala ah CSKA Moscow iyo Benfica oo ciyaartooydu la daawan doono waqtiu hore oo 8: 00 Fuudnimo ah.